Inqubomgomo yobumfihlo - Inqubomgomo Yobumfihlo
ungigcina kanjani isithwathwa samakhemikhali esenziwe ngokwenza
zingaki izinkomishi zerayisi kuphawundi
ikhekhe le-almond poppy seed usebenzisa ikhekhe lokuxuba
ungakwazi ukufaka umhluzi wenkomo esikhundleni somhluzi wenkukhu
Siyabazisa ubumfihlo bakho.
Le webhusayithi izogcina imininingwane ethile mayelana nokuncamelayo kwikhompyutha yakho ngaphakathi kwefayela elincane elibizwa ngokuthi ikhukhi. Ikhukhi ucezu oluncane lwedatha iwebhusayithi elicela isiphequluli sakho ukuthi siligcine kukhompyutha yakho noma kudivayisi yakho ephathekayo. Ikhukhi ivumela iwebhusayithi ukuthi ikhumbule izenzo zakho noma okuthandayo ngokuhamba kwesikhathi.
Ungasusa wonke amakhukhi asevele akhona kukhompyutha yakho, futhi ungasetha iziphequluli eziningi ukuzivimbela zingabekwa. Kodwa-ke, uma wenza lokhu, kungadingeka ukuthi uguqule izintandokazi zakho njalo lapho uvakashela isayithi, futhi ezinye izinsizakalo nokusebenza kungasebenzi.
Iziphequluli eziningi zisekela amakhukhi, kepha ungasetha isiphequluli sakho ukuthi siwanqabe futhi ungawasusa noma kunini lapho uthanda khona. Ungathola imiyalo lapha ngokuthi ungakwenza kanjani lokho kwiziphequluli ezahlukahlukene.
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukwenza:
I-1) Ikhombe njengomsebenzisi obuyayo futhi ubale ukuvakasha kwakho ekuhlaziyweni kwezibalo zethrafikhi
2) Khumbula izintandokazi zakho zokubonisa ngokwezifiso (njengokuthi ukhetha imibono ukubonisa konke okuwile noma cha)
4) Nikeza ezinye izici zokusebenziseka, kufaka phakathi ukulandela umkhondo wokuthi ngabe usuyinikezile yini imvume yakho kumakhukhi
Ukunika amandla amakhukhi akudingeki ngokuqinile ukuze iwebhusayithi isebenze kodwa kuzokunikeza umuzwa wokuphequlula ongcono.
Imininingwane ehlobene nekhukhi ayisetshenziswanga ukukukhomba uqobo futhi ayisetshenziselwa enye injongo ngaphandle kwaleyo echazwe lapha.
Kungenzeka kube nezinye izinhlobo zamakhukhi ezenziwe ngemuva kokuthi uvakashele le webhusayithi. Leli sayithi lisebenzisa i-Google Analytics, insizakalo edumile ye-analytics yewebhu esebenzisa amakhukhi ukusiza ukuhlaziya ukuthi abasebenzisi basebenzisa kanjani isayithi. Imininingwane eyenziwe ikhukhi mayelana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) izodluliselwa futhi igcinwe yi-Google kumaseva ase-United States. I-Google izosebenzisa lolu lwazi ngenhloso yokuhlola ukusebenzisa kwakho enye iwebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko ngomsebenzi wewebhusayithi, nokunikeza ezinye izinsizakalo eziphathelene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-inthanethi. I-Google nayo ingadlulisela lolu lwazi kubantu besithathu lapho kudingeka khona ngomthetho, noma lapho abantu besithathu abacubungula ulwazi bakwenzela i-Google. I-Google ithembisa ukungahlobanisi ikheli lakho le-IP nanoma iyiphi enye idatha ephethwe i-Google.
Leli sayithi linezinkampani zokukhangisa ezivela eceleni ezikunikeza izikhangiso lapho uvakashela. Lezi zinkampani zingagcina imininingwane ngokuvakasha kwakho lapha nakwamanye amawebhusayithi ukuze zikunikeze izikhangiso ezifanele mayelana nezimpahla nezinsizakalo. Isibonelo, uma bazi ukuthi yiziphi izikhangiso oziboniswayo ngenkathi uvakashela leli sayithi, bangaqikelela ukuthi bangakukhombisi ezifanayo ngokuphindaphindiwe.
Lezi zinkampani zingasebenzisa amakhukhi nezinye izihlonzi ukuqoqa imininingwane elinganisa ukusebenza kokukhangisa. Imininingwane ngokuvamile ayikhonjwa ngokomuntu siqu ngaphandle kokuthi, ngokwesibonelo, unikezela ngemininingwane ekhomba wena uqobo ngesikhangiso noma ngomyalezo we-imeyili.
Akuhlanganisi ukuxhumana kwakho namasayithi angahlangene nobunikazi bakho ekukunikezeni izikhangiso ezisuselwa kuntshisekelo.
Leli sayithi alihlinzeki nganoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kubakhangisi noma kumasayithi enkampani yangaphandle. Abakhangisi nabanye abantu besithathu (kufaka phakathi amanethiwekhi wesikhangiso, izinkampani ezisebenzisela izikhangiso, nabanye abahlinzeki bezinsizakalo abangabasebenzisa) bangacabanga ukuthi abasebenzisi abaxhumana noma abachofoza isikhangiso esenzelwe wena noma okuqukethwe bayingxenye yeqembu leso sikhangiso noma okuqukethwe iqondiswe (ngokwesibonelo, abafundi basePacific Northwest abafunda izinhlobo ezithile zama-athikili). Futhi, amanye amakhukhi wenkampani yangaphandle angabanikeza imininingwane ngawe (njengamasayithi lapho ukhonjiswe khona izikhangiso noma imininingwane yabantu) evela emithonjeni engaxhunyiwe ku-inthanethi kanye naku-inthanethi abangayisebenzisa ukukunikeza ukukhangisa okuhambisana kakhulu nokusizayo.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi yiziphi izinketho onazo mayelana nokukhawulela ukuqoqwa kolwazi ngamanethiwekhi wesikhangiso esivela eceleni, ungaxhumana newebhusayithi Initiative Network Advertising Initiative .
Ungakhetha ukuphuma ekubambeni iqhaza kumanethiwekhi wokukhangisa asuselwa kuntshisekelo, kepha ukuphuma akusho ukuthi ngeke usathola ukukhangisa okuku-inthanethi. Kusho ukuthi izinkampani okhethe ukuphuma kuzo ngeke zisenza ngezifiso izikhangiso ngokususelwa kuzintshisekelo zakho namaphethini wokusebenzisa iwebhu kusetshenziswa ubuchwepheshe obususelwa kukhukhi.
Leli Sayithi lihambisana neCMI Marketing, Inc., d / b / a CafeMedia (CafeMedia) ngenhloso ukubeka ukukhangisa eSizeni , futhi iCafeMedia izoqoqa futhi isebenzise imininingwane ethile ngezinjongo zokukhangisa. Ukuze ufunde kabanzi ngokusetshenziswa kwedatha kweCafeMedia, chofoza lapha www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy
Le sayithi ayithengisi, ayiqashisi, noma ayivezi kumaqembu angaphandle imininingwane eqoqwe lapha, ngaphandle kwalokhu okulandelayo:
(a) Abahlinzeki Bezinsizakalo Ababambisene: Le sayithi inezivumelwano nabanikezeli bezinsizakalo abahlukahlukene abasebenzisanayo ukwenza lula ukusebenza kwesiza. Isibonelo, isiza singabelana ngemininingwane yekhadi lakho lesikweletu nomhlinzeki wesevisi yekhadi lesikweletu ukucubungula ukuthenga kwakho. Bonke abahlinzeki bezinsizakalo zokuphatha abasetshenziswa yileli sayithi kudingeka babe nezinga elifanayo lokuvikelwa kobumfihlo njengoba kwenza leli sayithi, ngakho-ke imininingwane yakho izophathwa ngezinga elifanayo lokunakekelwa. Ngokwengeziwe, isibonelo, leli sayithi lingasebenzisa izinsizakalo zokuhlaziya noma zokumaketha ezifana ne-Google Analytics, i-Google Adsense, i-Taboola, noma i-RevContent, okuyiqoqo ovumelana nalo ngokungenamibandela.
(b) Lapho kudingwa ngumthetho: Leli sayithi lingabelana ngemininingwane eqoqiwe lapho kudingwa khona ngumthetho, ikakhulukazi ekuphenduleni okufunwa yiziphathimandla zikahulumeni lapho leyo mfuno ihlangabezana nezimfuneko zomthetho.
(c) Ukuhlaziywa kwezibalo: Leli sayithi lingabelana ngemininingwane engeyona eyeyomuntu kanye nolwazi oluhlanganisiwe nabantu besithathu, kufaka phakathi kepha kungagcini ngokukhangisa noma ngezinjongo zokumaketha. Ayikho imininingwane yomuntu ezokwabiwa ngale ndlela.
(d) Okwenziwayo: Ngokuhlobene, noma ngesikhathi sezingxoxo, kwanoma yikuphi ukuhlangana, ukuthengiswa kwempahla yenkampani, ezezimali noma ukutholwa, noma kunoma isiphi esinye isimo lapho Ulwazi Lomuntu Siqu lungavezwa khona noma ludluliselwe njengempahla yebhizinisi.
Ungakhetha Kanjani Ekukhangisweni Okusekelwe Kwintshisekelo
Ukukhetha Ngaphandle Kwezinsizakalo Zokukhangisa Ezinentshisekelo : Le webhusayithi iyilungu le- Initiative Network Advertising Initiative (NAI) futhi inamathela kumakhodi wokuziphatha we-NAI njengoba kuchaziwe kuwebhusayithi ye-NAI. Le webhusayithi iphinde ithobele imigomo yokuzilawula ye-Digital Advertising Alliance (DAA). Ukuthola incazelo yoHlelo lwe-DAA, sicela uvakashele i- Iwebhusayithi yeDAA .
Ukukhetha Ukuphuma Ekukhangisweni Okusekelwe Kwintshisekelo Yabantu Besithathu : Ukuthola kabanzi ngokukhangisa okususelwa kuntshisekelo ku-inthanethi nokuthi ungakhetha kanjani ukuqoqwa kolwazi ngale njongo yizinkampani ezibamba iqhaza kwi-Network Advertising Initiative noma kwi-Digital Advertising Alliance, vakashela Ikhasi lokuphuma le-NAI noma Ikhasi Lokukhetha Abathengi le-DAA .